ဝတ်လစ်စလစ်မည်သို့ယူရမည်: မိန်းကလေးများကသူတို့၏အကောင်းဆုံးဝတ်လစ်စလစ်မည်သို့ယူသည်ကိုပြောပြသည် - သတင်း
အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းအနုပညာ - မိန်းကလေးများအားသူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခဲ့သည်
မိန်းကလေးများသည်ဆိုးယုတ်သောပါရမီများဖြစ်သည်။ မင်းဒီနေရာကို ဦး ဆုံးကြားတယ် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ သင်ဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့သူတို့လုပ်နိုင်တာတွေအကြောင်းတစ်နာရီကြာစကားပြောနေတယ်ဆိုရင် ဒစ်ချိန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ပါ သို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်ပြသည် သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပြပါ , သို့မဟုတ်လိင်ဝန်းရံသောပီပီမိတ်လိုက်အကနှင့်လုပ်ရန်ဘာမှမ - သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ငှက်များသည်အမွေးအမွေးများရှိသောကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့ရှေ့တွင်ရှိနေပြီးသူတို့လိုက်မီနိုင်သမျှလိုအပ်သည်။
အမျိုးသမီးများအိတ်ထဲတွင်လုံးဝရှိသည်မှာ - ဝတ်လစ်စလစ်မည်သို့ယူရမည်နည်း။ ယောက်ျားလေးများသည် ... လေးထောင့်နှင့်တူသည်? စုစုပေါင်း? ထိုသူတို့ထဲကနှစ်ခုရှေ့မှောက်သို့မဟုတ်နောက်ကွယ်မှထံမှပဲဒစ် pics ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများ - wow ။ ဤဆောင်းပါးသည်စကားလုံး ၁၀၀၀ ကျော်သောအချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သည်ကျွမ်းကျင်သော်လည်း၊ ယခုအချိန်တွင်ဆီလျှော်မှုမရှိပါ။ လူတိုင်းကအမြဲသူတို့ရဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ဂိမ်းတက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ ပုံထဲမှာမင်းရဲ့မျက်နှာကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား။ pussy ပုံကိုဘယ်လိုယူမလဲ pose ထဲက Run နှင့်အတူတူပင်တ ဦး တည်းလုပ်နေစောင့်ရှောက်? ကလေးမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျွန်မတို့မိန်းကလေးများအားဝတ်လစ်စလစ်မည်သို့ယူရမည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်၊ သူတို့၏အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကသင်၏ဝတ်လစ်စလစ်သည် Louvre နှင့်သင့်တော်လိမ့်မည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအတွင်းခံအဝတ်အစားတစ်ခုချင်းစီကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူဓာတ်ပုံ Montage ယူပါ
ပထမတစ်ခုကမင်းတို့သူတို့ကိုမင်းကိုပိုက်ဆံထပ်ပို့ခိုင်းတယ် (မင်းကဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့) ။ ပြီးတော့သူတို့ဝတ်ချင်တဲ့အဝတ်အစားဘယ်လိုချိုချင်လဲ၊ sexy လား၊ ပြည့်တန်ဆာလား? ထို့နောက်သူတို့ကိုအံ့အားသင့်စေပါ။ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်။ ၀ တ်စုံပုံကိုဓာတ်ပုံတပုံတည်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချွတ်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ Self-timer အတွက်၊ ဒီလုယူတဲ့ထောင့်တွေကိုရယူပါ၊ ဒါကစူပါ sexy စိုစွတ်တဲ့အသွင်အပြင်ကိုရရှိဖို့ခန္ဓာကိုယ်ဆီဆီစိုက်ထူပြီးသင့်ရဲ့နှာခေါင်းကိုဆွဲဆန့်ပါ။
အစဉ်အမြဲပိုပြီးအဝတ်အချည်းစည်း, sexier တန်းတူမယူဆပါနဲ့, အတွင်းခံအဝတ်အစားလည်းစူပါ sexy ဖြစ်ပါတယ်
အဆင်ပြေဒါငါများသောအားဖြင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုဝတ်လေ့ရှိတယ် (အနက်ရောင်အားလုံးကငါ့ကိုငါပိုပြီးလိင်စိတ်ခံစားစေတယ်။ ဒါကလက်ခံသူအတွက်အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါထွက်သွားပြီးခြေအိတ်နဲ့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ခါးပတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု) ။
Self timer သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်
သင်ဝတ်လစ်စလစ်မည်သို့ယူရမည်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တဲ့အခါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကို timer နေရာမှာရာဇဝတ်မှုလျော့နည်းနေသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ Bum ၏ pics သည်။ ဒါ့အပြင်ငါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိင် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုပင်လျှော့မတွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်! သင့်ရဲ့နောက်ကျောကနောက်ကွယ်မှစူပါ sexy နှင့် collarbones ကဲ့သို့သောအရာများကိုကြည့်နိုင်သည်။ ငါအဆုံးပန်းတိုင် ur ကိုယ်ပိုင်ဝတ်လစ်စလစ်သင့်အားဖွင့်ရှိခြင်းတရားဝင်သည်ထင်ထို့နောက်သင်ကသူတို့ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်သိသောကြောင့်။
သင့်ရဲ့ Bum အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုရန်စားပွဲခုံပေါ်မှာထိုင်
ငါအစဉ်အမြဲငါအစဉ်အဆက်ကိုယူအဆင်သင့်ဆုံးဝတ်လစ်စလစ်: ​​သင်၏တင်ပါးနှင့် Bum ပင်ပိုကြီးကြည့်ရှုစားပွဲပေါ်ဆောက်ထားတဲ့, လက်အားခါး၌ cinching နှင့် Boob ပိုကြီးကြည့်ဖို့အဘို့အရှေ့သို့မြှောင်။ ရှိုးမကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းလမ်းမရှိသောကြောင့်အရူးအထောက်အထားပါပဲ။
အင်းဝ၊ ၂၁ နှစ်
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်စစ်ထုတ်သည့်အရာများသည်အလွန်ချော့မော့ပြီးဓာတ်ပုံကို sexy ဖြစ်စေသည်
အစဉ်မပြတ်ငါအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် filter ကို add, ငါ့ဝတ်လစ်စလစ်အတွက်ကြောင့် pics ညဥ့်နက်နဲသောအရာ sexy Vibe ပေးပေမယ့်လည်းအသားအရေချောမွေ့, အဓိပ္ပါယ် accentuates ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ အားရစရာ
သင့်ရဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး လာစေဖို့ဘယ်လို
ငါအဝတ်အချည်းစည်း - ယူပြီး session တစ်ခုရှိမယ့်ငါသိလျှင်အစဉ်မပြတ်ငါ tan အတု
အနီရောင်တောက်ပမှုရှိခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့်မကြာခဏဆိုသလို tan အတုကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်အနာဂတ်တွင်အသုံးပြုရန်ဝတ်လစ်စလစ်တစ်လုံးလုံးကိုယူသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Boob များကို ပိုမို၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစေပြီးပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေပြီးယုံကြည်မှုတိုးပွားစေသည်
ရေချိုးခန်းမှန်သည် selfie ငါ့အကောင်းဆုံးထောင့်ရ
ငါမှန်သောခြေထောက်နေရာချထားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်, titties နှင့်ကောင်းတဲ့ဆုကြေးငွေဖြစ်သောငါ့မျက်နှာတစ်နည်းနည်းရသောကြောင့်ငါရေချိုးခန်းမှန်၌ငါ့ဝတ်လစ်စလစ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။
မင်းသမီး Emma, ​​21
အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းအစွမ်းထက်လှသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသည်ရှေ့တွင်ပါ ၀ င်သည့်ဘရာစီယာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသင်၏ Boobs များကိုထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလုပ်ပါစေ။ အထူးသဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကိုသင်၏ကိုယ်ခန်ဓာကို ဦး စွာဖွင့်လျှင်။ သင်အမှန်တကယ်အမှားမလုပ်နိုင်ပါ
Ellie, 21 နှစ်
သငျသညျတူညီသောအရာတို့ကိုလုပ်နေဆဲနှင့်သူတို့သည်သူတို့သတိထားမိစတင်ထင်လျှင် - တက်ရောနှောခြင်းနှင့်အစားလိင်ရာထူးတုပ, ထို့နောက်တစ် ဦး ရိုက်ချက်ယူပါ။ ဒါကြောင့်ဒူးထောက်ပြီးထိုင်နေတာနဲ့တူတယ်၊ ၎င်းသည်သူတို့အားအမှန်တကယ်သင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်ကူးနေသည်။
သင်ယူမယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရှိရင် self timer ကိုမလိုအပ်ပါဘူး ဝတ်လစ်စလစ် - ငါသိတယ်၊ ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေလည်းရှိတယ်။ သငျသညျကန ဦး ရယ်စရာအတိတ်ရသောအခါဒါဟာအတော်လေးပျော်စရာနှင့်ထိုသို့သောကောင်းသောရလဒ်များကိုရရှိသောကြောင့်, စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ သူတို့ကဘယ်လိုပုံနဲ့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ နည်းနည်းဘယ်ဘက်ကိုအနည်းငယ်၊
Izzy, 21 နှစ်
အဲဒီမှာမကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်အထူကြည့်ရှုကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကသင်၏ tummy သေးငယ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တင်ပါးပိုကြီးကြည့်ရှုလိုလျှင် - သင်၏ပေါင်သို့မဟုတ်သင်၏တင်ပါးပေါ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားထိုင်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်မှာသင့်ရဲ့ thong သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီပေါ်ဆွဲထုတ်။ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးခြေထောက်ကိုပြန်မှီလိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင်မင်းရဲ့မြည်းကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာကအပိုဆုကြေးတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်အားလုံးကပါးလွှာတယ်။
ယောက်ျားလေးများရဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်ကုန်အံ့, တစ် ဦး pussy ရိုက်ချက်ခုခံတွန်းလှန်လို့မရပါဘူး
ရေချိုးခြင်းမှလတ်ဆတ်ပါ၊ ထိုဘဝအကြောင်းကိုသင်ရရှိပါကရိတ်လိုက်ပါ။ သင်အမှန်တကယ် Netflix ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒိုးနတ်စားခြင်းများပြုလုပ်နေလျှင်ပင်သင်ကထိတွေ့နေပြီးဟန်ဆောင်နေသည်။ ဒါ့အပြင်မှန်ထဲမှာပွင့်လင်းခြေထောက်တစ်ကိုယ်လုံးပါဝင်ပတ်သက်ရအလွန်ကြီးစွာသောတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် vag ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းဘက်ကလှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်တွေကနောက်ကွယ်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး vag နဲ့ ass လိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတကယ့်လူစုလူဝေးကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်ပါက Self timer timer ။ သတိရပါ - ယောက်ျားလေးများသည် pussy ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သငျသညျဥစ္စာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ထင်ကြဘူးရင်တောင်သူတို့လိမ့်မည်!
လှိုင်းထနေသော vag pic အတွက်သင်၏တံတောင်ဆစ်များကိုပြန်မှီပါ
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ vag ၏ညာဘက်ထောင့်ကိုရဖို့ငါ (သင်မဟုတ်လျှင်အစိုးရသူလျှိုကိုငါကြောက်လန့်ဘူး) သင့်ရဲ့ laptop ကို webcam သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းဖြစ်စေအသုံးပြုရန်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ကင်မရာအတွက်သင်၏တင်ပါးကိုရှေ့သို့ဆွဲ။ သင်၏ ၁၀၀% ရှေ့မျက်နှာအပြည့်အတွက်သင်၏တံတောင်ဆစ်များသို့နောက်သို့လှည့်ပါ။ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလိင်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနောက်ဖုန်းကိုအခြားတစ်ဖက်လက်နဲ့ကိုင်ထားလိုက်ရုံပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်အိပ်ယာရဲ့အဆုံးမှာစာအုပ်အစုအဝေးတစ်ခုပေါ်မှာကိုယ်ခန်ဓာအပြည့်အဝမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နေရာချလို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
pussy pics ရိုက်ယူခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်စေသည်၊ သူတို့နှစ်သက်ကြသည်။
Full-frontal ကင်မရာထောင့်တွေကခြိမ်းခြောက်မှုရှိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ရိုးရိုးသားသားလပ်တဲ့ရလဒ်တွေရှိသလား။ ဒါဟာငါ၌ငါအရေပြားကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ငါ့ကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့သည်: ဟုတ်, ငါ့ labia ပါပဲ။ အဆင်မပြေပါကသင်၏ဖုန်းကိုသင်၏ချောမွတ်သောလိင်အင်္ဂါထဲသို့ကျစေခြင်းသည် GROSS ဟုခံစားရသည်။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါသော vag shot သည်မှန်ကန်သောနေရာများသို့ရောက်ရှိသွားသည်
ငါမှန်ရှေ့တွင် pussy ရိုက်ချက်များ၊ ဒူးများပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ခါးသည်ပြတ်သွားသည်။ သို့သော်တင်းပါးကကြီးမားသည်။ ငါနို့စို့သူငယ်လေးဖြစ်သောကြောင့်ငါ၏လက်များကိုအနည်းငယ်တွန်းထုတ်နေစဉ် vag ကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်း။ အားရစရာ
သင်၏ Boob များကိုရေအေးဖြင့်ဖြန်းပါ
သင့်ရဲ့ Boobs တွေကိုရေအေးနဲ့ဖြန်းပြီးသူတို့ကိုအဝတ်မဝတ်ခင်မှာသူတို့ကိုစူပါ perky ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ။ နို့သီးခေါင်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ ရေကိုချက်ချင်းမရရှိနိုင်သော်လည်းသင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုလျှင်သူတို့ကိုလည်း pinch သို့မဟုတ်သူတို့ကိုနည်းနည်းမှုတ်ပါ။
အဝတ်အချည်းစည်းပေးပို့ခြင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အရာအားလုံးကို Whatsapp သို့မဟုတ် Snap တွင်ပို့ပါ
သင်၏ဝတ်လစ်စလစ်များနှင့်အမှန်တကယ်လုံခြုံမှုရှိလိုလျှင်၎င်းတို့ကို Snap သို့ပို့ပါ၊ သို့မှသာ၎င်းတို့ပျောက်ကွယ်သွားမည်၊ သင်သူတို့ကို၎င်းတို့အားထိန်းသိမ်းစေလိုပါက Whatsapp တွင်ပေးပို့ပါ - ၎င်းသည်စာဝှက်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်သင်မမှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်တက်တူးတွေကိုဖုံးထားပါ။ လိုလိုမယ်မယ်။ ထိုသူကိုသင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်လျှင်တောင်မှ ၀ တ်ပြုခြင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်းသည်လွန်စွာအရေးကြီးသည်၊ သို့သော်ဤသို့ပြုခြင်းကသင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်စေသည်။
မှန်ကန်သောအလင်းရောင်နှင့်မည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုသင်မသိပါက Snapchat ရှိပထမဆုံး filter ကိုသာအသုံးပြုပါ
ငါအလင်းရောင်အဘို့အ hack အမှန်တကယ် Snapchat အပေါ်ယူသည် (သိသာဇာတ်လမ်းထပ်ထည့်ရန်မသတိထားပါ) နှင့်ပထမ ဦး ဆုံး filter ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် - ငါကသင်၏အသားအရေကယ့်ကိုချောမွေ့ခြင်းနှင့်တောက်ပစေသည်ထင်ပါတယ်။
သင်ဗွီဒီယိုတစ်စောင်ပို့နေလျှင်သင်အမှန်တကယ် sexy ရှာတွေ့သည့်အရာကိုလုပ်ပါ၊
မင်းကဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းကိုဖွင့်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့်စာသားအရမင်းကိုလိင်မှုကိစ္စခံစားရစေတဲ့၊ လှောင်ပြောင်သရော်မှုတစ်ခုထပ်လုပ်ပါ၊ မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုသွားပါသို့မဟုတ်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရုံသာမကရိုက်ကူးရေးအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ထိုသို့အောက်တန်းကျဖြစ်ဖို့မလိုပါ, ဝတ်လစ်စလစ်ရင်ခုန်စရာနှင့်ချစ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ရေချိုးကန်ထဲရှိ sultry အလားသို့မဟုတ်ငါစာသားကတစ်ခါတစ်ရံ nudie post shower ကိုကခုန်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သီချင်းများသို့ကျွန်ုပ်၏ကဗျာဆန်ဆန်ရိုက်ယူခြင်းသာဖြစ်သည်။
သူတို့ကပထမ ဦး ဆုံးအလိုရှိသည်ဆိုပါကသူတို့ကိုမေးမြန်းပါ၊
သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကအမြဲတမ်းလိင်မှုကိစ္စဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့မပို့ခင်မှာသူတို့ကဝတ်လစ်စလစ်လိုချင်လားမေးပါ။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာသူဟာ pleeeeease လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်၊ ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာဝတ်လစ်စလစ်မချခင်သင့်ကိုတွေ့ဖို့တောင်းပန်တာလည်းရှိတယ်။ y'know, တင်းမာမှုတည်ဆောက်?
• သင့်မှာသေးငယ်တဲ့ Boobs ရှိရင်အဝတ်အချည်းစည်းယူနည်း။ လမ်းညွှန်
• ယောက်ျားလေးများကိုမေးတယ်။ မင်းအကြိုက်ဆုံးအဝတ်အစားအမျိုးအစားကဘာလဲ။